Ifulethi 11 Inkantolo yasePopeshead
11 Inkantolo yase-Popeshead ayikwazanga ukuba phakathi kule ndlu yokugcina impahla efiselekayo emaphakathi nedolobha lase-York. Unayo yonke into phakathi kwezinyathelo ezimbalwa ngokusebenzisa eyodwa yama-snickleways amaningi adumile ase-York.
Jabulela lesi sakhiwo esijabulisayo njengesisekelo sokuhlola konke okunikezwa yi-York. Izinto ezihehayo, izitolo, kanye ne-Yorks yeminyaka engu-2000 yomlando ingaphakathi kohambo olufushane ukusuka e-Popeshead Court kanye no-Marks no-Spencer kanye nemakethe kuphela imizuzu emibili ukusuka lapho, unakho konke okudingayo ukuze usingathe ubusuku obupholile, ngaphandle kwalokho ungathola i-Yorks. Ukukhetha okumangalisayo kwezindawo zokudlela ezizimele nemigoqo ukuhamba nje okufushane.
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$332.